Wararkii u dambeeyay ee Burundi - BBC Somali
Wararkii u dambeeyay ee Burundi
Ciidamada daacada u ah madaxweynaha Burundi Pierre Nkurunziza, ayaa sheegay in ay gacanta ku hayaan gooba muhiim ah oo ku yaalla caasimada, maalin un kaddib markii uu dhacay afgambi looga soo horjeedo.
Waxaa jira rabsahado ka dhacay Bujumbura, qaasatan xafiiska raadiyaha qaran, waloow hadda la sheegayo in arrinta ay xasishay.
Wararaku waxa ay sheegayaan in ay dhinteen shan askari.
Mr Nkurunziza, ayaa ku sugnaa Tanzaia, markii uu afgambiga dhacay talaadadii, ilaa haddana lama oga halka uu ku sugan yahay.
Ma jiraan warar cusub oo ka soo yeeray Generaalka ku dhawaaqay afgambiga.
Dibad baxyada ayaa ka bilowday Burundi 26-kii April, markii uu Mr Nkurunziza, uu sheegay in jagada u tartamayo markii sedexaad, tallaabadaas oo ay ku tilmaameen dadka ka soo horjeeda mid aan dastuuri ahayn.
Afgambiga ayaa waxaa ku dhawaaqay Genraal Godefroid Niyombare, oo horay asxaab ay u ahaayeen madaxweynaha, Arbacada kaddib ayaa Nkurunziza, waxa uu u safray magaalada Dar es Salaam, oo ah magaalada ugu weyn ee dalka Tanzania, si uu uga qeybgalo kullan looga hadlayo rabshadaha ka taagan dalkiisa.